Berbera: Hirdanka Duullaanka Sharka, Difaaca Samaha Iyo Digniinta Mucaaridka | Ogaalnews
Berbera: Hirdanka Duullaanka Sharka, Difaaca Samaha Iyo Digniinta Mucaaridka
October 6, 2015 | Published by: Khadar Jaamac Dirir (Jacayl)
Hargeysa, 06 Oct 2015 (Ogaal)-Xildhibaan Siciid Cilmi Rooble oo ka tirsan Golaha Wakiilada Somaliland, ayaa ka hadlay qaddiyadda haamaha shidaalka magaalada Berbera, waxaana uu sheegay in aan golaha wakiiladu go’aan ay gaadheen cidina burin Karin. Isla markaana wuxuu xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo ugu baaqay in go’aanka Golaha ka soo baxay ku dhaqanto oo ay joojiso wixii abuuri kara kacdoon shacab.
Xildhibaan Siciid Cilmi Rooble oo arrimahaa sharraxaya wuxuu yidhi; “Waxaanu qarankan iyo ummadda u sheegaynaa inuu goluhu go’aan gaadhay, go’aankaa golahana waxaa burin kara oo kaliya go’aan gole. Waxaan xukuumadda uga digayaa dhaqdhaqaaqaa faraha badan ee abuuri kara kacdoon nabadgalyada waxyeeli kara, khalkhala galin kara wixii aynu muddada ka soo shaqaynaynay. Marka waxaan xukuumadda ugu baaqay inay ku dhaqanto go’aankii golaha ka soo baxay.”
Dhinac kale, Siciid Cilmi Rooble wuxuu farriin u diray shacbiga reer Berbera. “Waxaa kale oo aan u sheegayaa shacbiga reer Berbera dalka innaga leh, hantidaa ummada ee aynu innagu ammaanada u haynana masuuliyaddu inagay ina saaran tahay. Waxaan jecelahay inay iska ilaaliyaan wixii amni darro keeni kara, xukuumaddu gacmaheeda haku burburiso, xukuumaddu ha bilowdo Sharka, imikaba way daba socotaayee sharbay rabtaa, laakiinse idinku ha bilaabina, markay iyadu bilowdo talo ayay isaga imanayaan deegaanka reer Saaxil oo dhan” Ayuu yidhi. Wuxuu intaa sii raaciyay oo uu yidhi; “Shacbiga reer Somaliland waxaan leeyay Xukuumaddu way sii socotaa, mana doonayso inay wax kaga sii tagto, dhul kama tagayso, oo hanti kama tagyso, oo deked kama tagayso, oo adduun kama tagayso, waxay rabtaa inay xaalufiso, Xukuumadani maaha mid qarankan lexejeclo ka leh, waa niman shaqo yimi, ee caloosha taa ha la geliyo.”
Dhinaca kale murashaxa madaxweynaha ee xisbiga Ucid Jamaal Cali Xuseen ayaa ka hadlay xaaladda waqtigan ee magaaladda Berbera. Hadal uu warbaahinta siiyayna wuxuu ku yidhi;“Waxa degdeg ahi igu soo gaadhay in magaaladda Berbera lagu xidhay 11 oday oo isugu jira waxgarad, mujaahidiin iyo saxaafadda laftooda. Arrintana waxay daaran tahay arrinta haamaha, waa la wada ogyahay in baarlamaanku laalay, markaa anigu garan maayo sababta dawlada Siilaanyo ilaa hadda u daba socoto. Waxaan leeyahay arrinkan haamuhu wuxuu noqonayaa arrin xaasaasiya, waana sababta nimankaa waxgaradka ah ee diiday ee ka soo hor jeestay loo xidhxidhayo. Boobka hantida qaranka ma ogolin, haamaha marnaba lama aqbali karo, 24 milyan oo doolar baa ka soo baxa bishii, shan sanadood buu Siilaanyo 24kaa milyan ee doolar uu qaadanayay oo uu dhacay oo aanay dakhliga dawladda gelin. Siilaanyo in lagaga daba tago oo maxkamad sharci lala tiigsado hadduu xilka ka tago iyo hadduu ka tagaba ayaa muhiimadu tahay ee maaha in la yidhaahdo hantidii baa xoog lagu wareejinayaa. Waxaan u malaynayaa tay ku dhimanayeen waa tan haamaha. Waar hooy jooga, ruuxii baxaya buuraha jinkaa loo bidhbidhiyaa, waar hooy haamahaasi way idin galaafan doonnaan ee ka jooga.”